Facebook မှာ သင့် Page ကို မှန်ကန်စွာ ဖျက်နည်း
Facebook ပေါ်ရှိ သင့်စာမျက်နှာကို မှန်ကန်စွာ ဖျက်နည်း
အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်နေလျှင်သို့မဟုတ်သင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုလွှမ်းမိုးသူဖြစ်လျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိနိုင်သည်ဟူသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သီးသန့်စာမျက်နှာတစ်ခုကသင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်၎င်းကိုတစ်ခုတည်းသောအောက်၌စုစည်းထားရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။ ယခုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သို့မဟုတ်အမှတ်အသားပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်နေပါက Facebook ရှိသင်၏စာမျက်နှာကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
အဆင့် 3. သင်၏ Facebook အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်ပါ။ အကောင့်ဝင်ရန် သင့်လျော်သောအထောက်အထားများကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။
အဆင့် 4. Facebook ပင်မစာမျက်နှာ၏ အပေါ်ညာဘက်ခြမ်းရှိ တြိဂံပုံလေးကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 5. 'Your Pages' ကဏ္ဍအောက်ရှိ စာမျက်နှာအမည်ကို နှိပ်ပါ။ ဒီစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် 6. သင့်စာမျက်နှာရှိ 'ဆက်တင်များ' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
7 အဆင့်။ ဘယ်ဘက် panel တွင် 'General' tab ကိုနှိပ်ပါ။
ဘတ် PC အမှားတွင်မမြင်ရသော iPhone ဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
အဆင့် 8. ယခု၊ ညာဘက်အခြမ်းရှိ ဝင်းဒိုးတွင် အောက်သို့ဆင်းပြီး 'စာမျက်နှာ ဖယ်ရှားရန်' ရွေးစရာကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 9. ငြင်းဆိုချက်မှ 'ဖျက်မည်' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် 10. နောက်ဆုံးတွင် အတည်ပြုချက်မျက်နှာပြင်ရှိ 'စာမျက်နှာဖျက်မည်' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ယခုသင်၏စာမျက်နှာကိုဖျက်ရန်စီစဉ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အပြောင်းအလဲများထင်ဟပ်ရန် ၁၄ ရက်ကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်မင်းဒီနောက် ၁၄ ရက်ကိုမင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာမယ့်အပြောင်းအလဲကိုသူတို့ကိုအသိပေးပါ။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်အတွက်မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုဖျက်ချင်ရင်စာမျက်နှာကိုဖျက်မယ့်အစားမင်းကဒီနည်းကိုသုံးပြီးအဲဒါကိုဖြန့်ချိလိုက်ရုံဘဲ။
လွန်ခဲ့သော Telegram မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဘယ်လို စနစ်တကျ ထားခဲ့မလဲ။
နောက်တစ်ခု Snapchat တွင် cache ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမည်နည်း။